KATHMANDUTemperature 14°CAir Quality155
एउटा बेहोरा नभएको नेपाली उखान सुन्थेँ, ‘पत्नी अर्काकी राम्री, छोराछोरी आफ्ना राम्रा ।’ यो उखान कतिलाई लागू होला, कतिलाई नहोला । तर हामी नेपालीलाई नेताचाहिँ अर्कैका राम्रा लाग्छन् । यसमा शंकै छैन । हामीलाई पराई देशका नेताहरूले कुनै काम गर्दा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न मन लाग्छ । त्यस्तै काम आफ्ना नेताले गर्दा उन्मुक्त कण्ठले गाली गर्न मन लाग्छ ।
छरछिमेकी देशकै नेताहरूका कुरा गरौँ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई हेर्नुस् त, क्या जिउँदाजाग्दा नेता छन् ! दमदार भाषण गर्छन्, वाकपटु छन्, जाँगरिला छन्, अनेक नयाँ–नयाँ अभियानका उद्घाटन गरिरहन्छन्, मिडियामा छाइरहन्छन् । जम्मु कश्मीरलाई झ्याप्प पारेर नियन्त्रणमा लिए । सेना लगाएर, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा बन्द गरेर आन्दोलन हुनै नदिई विपक्षीलाई दबाए । अमेरिकी राष्ट्रपति आउन लाग्दा एउटा ठूलो सुकुम्बासी बस्तीलाई रातारात पक्की पर्खाल लगाएर छोपछाप पारे ।
हाम्रा नेताको बुद्धि हेर्नुस् त, चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा के गरे ! जस्तापाता र प्लास्टिकले छोपछाप पारेर फोहोर लुकाए, बजेट स्वाहा पारे । पाहुनाका आँखामा छारो हाल्न पनि ढंग चाहिन्छ नि ! मोदीजीले त सिंगै सुकुम्बासी बस्ती नै पर्खालपारि पुर्‍याइदिए । चामत्कारिक नेता भनेको त त्यस्तो पो !
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई हेर्नुस् । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै आफूले सुविधामा पाएका महँगा–महँगा गाडी बेचेर सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा गरे । सडक जाम भएर जनताले दु:ख नपाऊन् भनेर अफिस जान–आउन हेलिकप्टर प्रयोग गरे । देशको विकास र जनताको उन्नतिका लागि के गर्दै छन् भन्ने समाचार त त्यति आइपुग्दैन यतातिर । तर नेता भनेकोचाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ ।
नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री साइकल चढेर सडकमा घुम्छन् । सर्वसाधारणसँग हात मिलाउँछन् । विदेशतिरका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुखहरू सपिङ गर्न पसल–पसल पुग्छन्, परिवारै लिएर समुद्र किनारातिर घुम्न निस्कन्छन्, सर्वसाधारणसँग सेल्फी लिन्छन्, सँगै बसेर खान्छन्, नाचगान गर्छन् । हाम्रा हेरौँ त हाम्रा ! बाँसुरी बजाएर बस्छन्, सारंगी रेटेर बस्छन् । कहिले लेखक/कवि बोलाएर कविता सुनाउँछन्, कहिले बच्चाहरू भेला गरेर गफ चुटेर बस्छन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले मर्यादामा बस्‍नु पर्दैन ? अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले बाँसुरी बजाएको भए त हामीले मुलुकमा त्यत्रो आगलागी भएका बेला पनि जनतालाई नआत्तिने सन्देश दिन बाँसुरी बजाउने हिरो भनिहाल्थ्यौँ नि । हाम्राले बाँसुरी बजाएपछि निरो भन्‍नु परेन ?
एउटा कुन देशमा हो, प्यारालाइसिसले बोल्न, हिँड्न नसक्ने भएर पनि एक नेताले दस वर्षदेखि प्रधानमन्त्री चलाइराखेको समाचार आएको थियो । उता, मलेसियामा सय वर्ष पुग्न लागेका नेता प्रधानमन्त्री भएका छन् । नेतामा त्यस्तो ऊर्जा हुनुपर्छ अनि पो देश बन्छ । हाम्रोमा त १५ वर्षदेखि बिरामी भएका नेता प्रधानमन्त्री छन्, युवा पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर आराम गर्नुपर्ने बेलामा सत्तामा टाँसिएका छन् । अनि, यसरी देशको प्रगति हुन्छ ?
भर्खरै एउटा कस्तो हाँसोलाग्दो समाचार सुन्‍नुपर्‍यो, कुन्नि कुन विदेशी संस्थाले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई एसियाकै सफल नेता भनेर घोषणा गर्‍यो अरे । कति हाँस्‍नु ! लौ त्यसले भुटानका प्रधानमन्त्री, मालदिभ्सका राष्ट्रपति वा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री भनेको भए आँखा चिम्म गरेर पत्याउनु हुन्थ्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि आँखा चिम्म गरेर नपत्याउनु परेन ? जति विचार गर्दा पनि नेता त अरू देशकै राम्रा !